आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्सन गरेका नेपाली युवा स्पिनर सन्दिपलाइ सम्मान नै सम्मान ! - Hamro Nepal Cricket
आइपिएलमा उत्कृष्ट प्रदर्सन गरेका नेपाली युवा स्पिनर सन्दिपलाइ सम्मान नै सम्मान !
सन्दिपलाइ सम्मानै सम्मान !
आइपिएल खेल्ने पहिला नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछाने स्वदेश फर्किएसङ्गै सम्मानका कार्यक्रमहरु सबैतिरबाट हुन थालेका छन। हिजो एयर्पोर्टमा सन्दिपको भब्य स्वागत भएको थियो।
घर फर्किए सन्दिप लामिछाने , एयर्पोर्टमा यस्तो रहयो उनको प्रतिक्रिया !
सरर कारमा गुड्ने भए सन्दिप ! सिप्रादीले प्रदान गर्यो २५ लाखको कार !